Sidee loo eegaa taariikhda Safari ee ku saabsan Mac-gaaga? | Waxaan ka socdaa mac
Sidee loo eegaa taariikhda Safari ee ku saabsan Mac-gaaga?
Kaliya maahan Safari ku siin doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad ugu dhex mari karto shabakadda kombiyuutarkaaga, sidoo kale waa tan ugu waxtarka badan marka ay timaaddo xakamaynta isticmaalka korontada ee OS X, kaas oo kordhiya nolosha batteriga ee Mac-gaaga.
Maaddaama isticmaaleyaal fara badan oo Mac ah ay isticmaalaan Safari maalin kasta, taariikhdooda daalacashada ayaa laga buuxiyey ilaa dhammaadka alwaaxyada bogagga ay horay u booqdeen. Haddii aad rabto dib ugu soo noqo goob hore loo booqday Markaad raadiso taariikhda dhirta oo dhan, waxay noqon kartaa mid daallan bilooyin ama sannado xog ah oo ku dhex jira.
Sida ku jirta macruufka, Safari for Mac waxay bixisaa toobiye ku habboon oo kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh ugu booddo bog kasta oo hore loo booqday oo ku saleysan tab kasta.
Sida loo arko taariikhda Safari ee dhawaanta Mac:
1) Baxso Safari Mac-kaaga, furi tab cusub, oo booqo boggaga internetka qaarkood, raacna xiriiriyeyaasha qaarkood.
2) Samee guji y taabo oo ku dheji badhanka 'Back' Safari on toolbar sare.
3) Xullo bog hore loogu soo booqday liiska, oo sii daa badhanka jiirka.
Websaydhyada ka muuqda liiskan waxay gaar u yihiin taariikhda tabta hadda jirta. Haddii aad u wareegto meel kale, oo guji oo hayso badhanka Hore u soco ka Safari, waxaad arki doontaa taariikh daaqsi oo ka duwan waxay kuxirantahay degellada gaarka ah ee aad booqatay. Sida aad u jeeddo waa aad u fudud, laakiin waxay ka mid yihiin waxyaabahaas aanad garanayn inaad ku akhrido mooyee.
Qaabkan toosa Sidoo kale way shaqaysaa Safari dhexdeeda iPhone, iPod taabashada iyo iPad. Saaxiibkeen Jordi, ayaa dhawaan na baray sida loo sameeyo a toobiye kiiboodhka, maxaad ku arki kartaa tan maqaal. Hadaad rabto inaad aragto taariikhda soo dejiso Mac-gaaga waad ku sameyn kartaa Halkan. Hadana waxaad rabto waa nadiifinta taariikhda dhirta laga bilaabo Safari, tubbada Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Sidee loo eegaa taariikhda Safari ee ku saabsan Mac-gaaga?
Runtii ma qortay maqaalkan ??? Dhagaxa miyaad ku qoslaysa?
Ku jawaab Topotamalder
Hahaha, berri maqaal dhig "sida loo daarto Mac-gaaga." LOL
Ku jawaab Chessy
Ninyahow haddii aysan kuu sheegin sida loo sameeyo khiyaanadan fudud, ma ogaan kartid, ugu yaraan waan ogaan lahaa.
Apple TV waxay soo martay koritaankeedii ugu sareeyay sanadka 2015
Apple waxay ka furaysaa seddex Apple Store cusub gudaha Hindiya kahor dhamaadka 2017